Soo Degso Degaan qeexitaan Sare v2.1 FSX & P3D - Rikoooo
downloads 62 942
Qoraa asalka ah Pablo Diaz, FSX cusboonaysiinta waxaa sameeyay Danny Glover iyo Erik BENDER (Rikoooo)
Cusub ! HDE v2.1 (deegaanka qeexitaanka sare) xirmo texture HD photo-macquul ah in kor u qaadi doontaa muuqaalka kore ee daruuraha aad (cumulus, stratus, cirrus), midabka cirka iyo faahfaahinta dhulka.
Kombiyuutarka oo rakibo / la rakibo nuqul iyo dib u soo celinta asalkaaga asalka ah. La jaan qaada dhammaan qalabka duulimaadka ee ku saleysan FSX (Prepar3D iyo Daabacaadda Steam). Nooca 2.0 ilaa 2.1 ee Rikoooo. Weligaa cirkaaga jilitaanka diyaaraddaadu uma eka sidii wax macquul ah, u fiiri daruuraha si aad u sarreeya, faahfaahinta dhulka oo fiicnaaday (geedo)
Qore: Qoraaga asalka ah Pablo Diaz, FSX cusboonaysiinta waxaa sameeyay Danny Glover iyo Erik BENDER (Rikoooo)